CUNISTA PASTEURELLOSIS: CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA CUDURKA - XOOLAHA
Sida loo daweeyo pasteurellosis ee bakaylaha
Haddii aad uur leedahay, waa inaad si taxadar leh ula socotaa caafimaadkooda. Marar badan, xayawaanku waxa ay saameeyeen jirro sida pasteurellosis ee bakaylaha, calaamadaha kaas oo lagu sharaxi doono qodobkan.
Pasteurellosis - mid ka mid ah cudurrada faafa ee ugu khatarsan. Cudurka pathogen waa Pasteurella wand. Cudurku wuxuu saameeyaa xuubka xabka ee mareenka neefta sare. Waa suurtagal in la ogaado calaamadaha ugu horreeya ee jirrada 5-10 saacadood ka dib marka ulahaagu galo jirka. Si xun ayay u muujiyeen, sidaas darteed, si loo ogaado jiritaanka cudurka ee marxaladaha hore way adag tahay.
Waa muhiim! Si looga hortago faafidda cudurka iyo caabuqyada jiirka, dhammaan xayawaanka la keeno beeraha waa in ay ku qaataan ugu yaraan 30 maalmood karantiil.
Waa suurtagalnimada dhimashada cudurka 15-75%, iyadoo ku xiran xaaladaha xoolaha iyo cuntada ay cunaan. Jaantuska dibedda ee pasteurellosis bakaylaha ayaa lagu muujiyay sawirka. Iyadoo jabinta cudurka:
shubanka ayaa bilaabmaa oo ka yimaadaa mindhicirka;
neefsashadu waxay noqotaa mid culus, oo ay weheliso xiiq;
xabsi ayaa ka qarsoon sanka iyo indhaha;
dabeecadda xayawaanka waxaa calaamad u ah murqaha, faragelinta;
heerkulka jirka wuxuu u kaca 41-42 digrii.
Caabuqa cudurku wuxuu dhici karaa wakhti kasta oo sanadka ah, jeexjeexayaasha jilicsan iyadoon loo eegin da'dooda iyo tarankooda. Dhallaanku waa mid aad u nugul.
Sidoo kale akhri cudurka noocan oo kale ah sida bakteeriyada coccidiosis, iyo daaweynta Solicox iyo Baycox.
Sida kor ku xusan, infakshanku wuxuu dhacaa marka dhirta Pasteurella galaan jidhka xoolaha. Caabuqa faafin karo lo'da, doofaarrada, idaha, digaagga, berriga iyo xayawaanka kale. Sidoo kale qofku wuxuu noqon karaa qaybiye - isgaadhsiinta ayaa loo wareejiyaa dharka iyo kabaha, oo leh quudin fayow ah, qalab iyo alaabtii la soo qaaday.
Kala qaadista jirka ee Pasteurella ayaa si dhakhso ah u dhacda, waxay u dhex galaan nidaamyada lenfiga iyo wareegga dhiigga, taasoo keenaysa dhacitaanka septicaemia. Waxyaabaha sunta ah waxay waxyeellaynayaan derbiyada daciifka ah, diirada dhiig-baxa ee dhiigga ku dhaca, barar ayaa lagu arkay.
Ma taqaanaa? Dhagaha ugu dheer waxaa ka mid ah Nipper ee Geronimo, dhererkoodu waa 79.06 cm. Waxaa mahad u leh dhagax weyn oo dhegaha ah, wuxuu ku dhacay buugga Guinness Records.
Nasiib darro, waa arrin dhib badan in la ogaado sababta dhabta ah ee cudurka, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa in si joogta ah loo baaro xayawaanka iyo sameynta tallaabooyin ka hortag ah.
Waxaa jira laba nooc oo horay u soo maray qallajisku. Tixgeli iyaga si faahfaahsan.
Inta badan marxaladda degdega ah ayaa lagu arkay bilowgii epizootic. Inta lagu jiro muddadan, jiirka ayaa badanaa la kulmay walaaca, waxay saameyn ku yeeshaan arrimo kala duwan oo isbedelaya: gaadiid lama filaan ah iyo waqti dheer ah, isbedelka xaaladaha daryeelka, dib-u-dhiska.
First of all, heerkulka jirka u kaca 41 digrii, xayawaanka diida in uu wax cuno, uu noqdo daciif, astaamaha xanuunada sare ee neefta muuqata, bakaylaha hindhisada, iyo jiritaanka duuf. Badanaa waxaad dareemi kartaa neefsasho degdeg ah oo neefta oo ku adkaata xayawaanka. Muddo ka dib, guuldaradii habka dheef-shiidka ayaa dhacaya, shubanka ayaa bilaabmaa. Burburinta jiirka ayaa si dhakhso ah loo fuliyaa, iyo 1-2 maalmood kadib dhimashadooda.
Waxaan kugula talineynaa in aad barato noocyada kala duwan ee bakaylaha: hilibka, ornamental, milkiilayaasha (gigli cad, cufan weyn), Californiya, Angora, madow-brown, marwo, suugo, flandr, chinchilla soviet.
Marka hore, xayawaanku waxay yeeshaan calaamado la mid ah kuwa uu ku dhaco rhinitis, conjunctivitis, iyo keratokonjunctivitis. Waxaa sidoo kale jiri kara shuban. Waqti ka dib, cudurka pleuropneumonia wuxuu kobciyaa fibroobe iyo fibrous-purulent.
Haddii xashiishyada lagu hayo xaalado aan fiicnayn ama ay ka mid yihiin daaqsinka aan caadiga ahayn, oofwareenku si dhakhso ah ayuu u faafaa wuxuuna keenaa dhimashada dhammaan xayawaanka. Maqaalka subcutaneous ee qaar ka mid ah bakaylaha, waxaa mararka qaarkood suurto gal ah in la ogaado maqaarka purulent, furitaanka kaas oo dhacaya ka dib 1-3 bilood.
Cilmi-baarista waxaa lagu sameeyaa iyada oo lagu salaynayo daraasaddaha kiliinikada, iyo sidoo kale ka dib marka la furo xayawaanka dhintay. Xaaladda epizootic ee gobalka ayaa sidoo kale si taxadar leh loo baaray, baaritaanka waxaa lagu xaqiijiyay in lagu caawiyo baarista bakteeriyada ee walxaha laga qaado xayawaanka dhintay.
Daaweynta bakaylaha cudurada kala duwan, daawooyinka sida Tromeksin, Enrofloxacin, Enroxil, Nitox 200, Loseval, Baytril, Biovit-80 ayaa loo isticmaalaa.
Ma suurtagal tahay in la daaweeyo bakaylaha
Haddii aad daaweyn bilowdo, waxaa jira fursado kasta oo lagu daaweyn lahaa xayawaanka. Si kastaba ha noqotee, wakiilka keena wali wuu ku jiri doonaa jirka, cudurkuna mar kale wuu sii faafi karaa.
Waa muhiim! Si looga hortago faafidda cudurka xayawaanku mar hore, waa in aan la gooyin, laakiin waa la gubay, maaddaama aaska fudud aanu burburin bacillada cudur keena.
Daaweynta, antibiotics iyo sulfonamides ayaa loo isticmaalaa, sida:
Koorsada daaweynta ee daawooyinkaan waa 3-4 maalmood, waa in la mariyaa marmarka qaarkood laba jeer maalintii. Haddii uu jiro nooc dabadheeraad ah, waa lagama maarmaan in la raaco nidaamkan soo socda: saddexda maalmood ee ugu horeeya si loo duro sulfonamides, kadibna 3 maalmood oo antibiyootiko ah kadibna mar labaad sulfonamides. Koorsada guud ee daaweynta waa qiyaastii 9-10 maalmood.
Maanta, "tallaalka wax laga soosaaray" waa mid aad u caan ah, laakiin waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in lagu daaweeyo bakaylaha carruurnimadiisu ay ka badan tahay 1.5 bilood. Daaweynta xayawaanka da'doodu tahay 20-40 maalmood, isticmaal serum, oo la maamulo 7dii maalmoodba mar inta lagu qiyaaso 4 ml 1 kg oo ah miisaanka bakteeriyada.
Marka uu pasteurellosis ku dhaco bakaylaha, waa lagama maarmaan in si deg deg ah loo daweeyo, maadaama cudurku uu si dhakhso ah u socdo oo aan suurtagal ahayn inuu badbaadiyo xoolaha.
Daaweynta jiirka oo leh dhaawac culus badanaa looma qaado - waa la dilaa oo la tuuraa si aysan infekshinka u sii faafin.
Si looga hortago faafidda cudurka, waa u qalantaa tallaabooyinka ka hortagga ah ee soo socda:
Ka hortagga bakaylaha qaba bakteeriyada isla markiiba daaweyn;
sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo ogaado waxa ay noqdeen ilo infekshan, si ay u fuliyaan waxyeelladooda;
nadiifin iyo jeermiska unugyada, aviaries, finanka biyaha iyo meelaha ku dhow. Xayawaanka lagu sii daayo baqashadooda waxaa suuragal ah 2 todobaad kadib daaweyn.
Nadiifinta guryaha xayawaanka waxaa lagu fuliyaa iyadoo loo marayo:
1% xalinta qaabaynta;
3% xal of lysol;
3% xalalka carbolic;
2% xal of soodhaha kiciska.
Miisaaniyaddan waa in lagu qallilo isla weelka isla markaana loola dhaqmo xalka kafakoolka iyo qolalka kale halkaas oo ay jiraan bakaylaha.
Ma taqaanaa? Nolosha bakaylaha ee bay'ada dabiiciga ah waa qiyaastii 10 sano. Si kastaba ha ahaatee, kii ugu da'da waynaa wuxuu ku dhintay da'da 19 jir.
Iyada oo gargaarka biyaha karkaraya waxaa lagu sameeyaa quudinta wax lagu karsado, cabbitaanka foornada, qashinka cawska iyo qalabka kale. Maadaama Pasteurella ay ku jiri karto digada, inta badan waxaa lagu aasay.
Marxaladda khasabka ah ee tallaabooyinka ka hortagga ah waa isticmaalka tallaalka pasteurellosis bakeyle. Waxay bilowdaa in si dhakhso ah loo isticmaalo, maaddaama jiirka ay gaaraan hal bil biloo da'da. Talaalka dadka qaangaarka ah waxaa la sameeyaa 2 jeer sanadkii. Maanta waxaa jira tiro aad u badan oo nidaamyo tallaal ah, markaa ka hor inta aanad codsanin waa inaad si taxadar leh u akhridaa tilmaamaha. Kuwa ugu caansan iyo waxtarkoodu waa sida daroogooyinka:
Pasteurellosis waa cudur aad u culus, suurtogalnimada dhimashada ka dib taas oo aad u sarreeya. Daryeelka haboon, taxaddar leh, iyo sidoo kale u hoggaansanaanta xeerarka antiseptics iyo tallaalka waqtigeeda, waxaad ka hortagi kartaa dhimashada xayawaanka.